Arrimo aad ku ogaan kartid inaad weli jeceshahay qof xiriir kaala dhexeeyo
Arrimo aad ku ogaan kartid inaad weli jeceshahay qof xiriir hore kaala dhexeeyay
Marka aad xiriir jacayl la wadaagtid qof, waxaa jira mararka qaar oo sidey doontaba haku imaatee aad dooneysid inaad dib u eegis ku sameysid dareenka aad qofkaas u qabtid.
Waxaa suuragal ah in xiriirkaas aad soo wadday muddo dheer ayna kula noqoto in dareenkaaga qalbigaaga ku jiray uu wax iska baddalay ama uu dhammaaday.
Ama xitaa waxaaba suuragal ah in qofkii uu xiriirka idinka dhexeeyay aad kala harteen, laakiin aad shaki ka qabtid go’aankaaga inuu saxnaa iyo in kale. Waxaad isweydiineysaa tolow wali miyaad jeceshahay qofkaas?
Jacaylku ma aha wax ku xiran nasiib oo aan la kala ogaan karin dhinaca uu u badan yahay. Balse waxaa adkaan karta inaad si dhab ah u ogaatid waxa ay naftaada jeceshahay marba haddii aadan khibrad fiican u lahayn.
Si aad u ogaatid in aad weli jeceshahay qof aad kala harteen, samee saddexdan arrimood.
1- Ka fikir markii aad billowday inaad su’aal galisid dareenka qalbigaaga
Dareenka jacaylka ee qalbiga hal habeen gudihiis iskuma baddalo. Dabcan in muddo ah ayey kugu qaadatay inaad qof jeclaatid oo aad xiriir la sameysatid ruuxa aad is fahanteen.
Haddaba inta andan ku dhaqaaqin jaritaanka xiriirka marka hore daraasad ku samee qalbigaaga, sababtoo ah haddii aad tallaabo deg deg ah qaaddid waxaa suuragal ah in aad xiriirkaaga u geysatid dhaawac aan kasoo kabasho lahayn.
Ceeb ha u arkin inaad waqti la qaadatid naftaada ka hor inta aadan go’aanka gaarin, hana iskudayin inaad xalka durbadiiba heshid.
Xitaa haddii intaasoo dhan ka hor uu xiriirkii go’ay, qiimeyntan samee si aad u ogaatid inaad wali jeceshahay qofkii aad kala harteen.
Isweydii su’aalo ku saabsan waxa noloshaada iska baddalay markii aad dareemeysay habacsanaanta ku aaddan jacaylkaaga.
tusaale ahaan, ma waxaad billowday shaqo cusub oo ku mashquulisay ama aad ku daashay? Ma waxaa jiray cadaadis dhinaca qoyska kaa heystay oo ku wajahnaa xiriirkaaga?
Xaqiiji in hoos u dhaca ku yimid xiriirkaaga jacaylka uu yahay mid ay sabab u yihiin arrimaha dabiiciga ah ee nolosha ama in uu kaa dhammaaday dareenkii aad qofkaas qalbigaaga ugu heysay.
2-Dib u eegis ku samee sida aad ula dhaqmeysid qofka aad xiriirka la wadaagtid
Waxyaabaha aad eegeysid waxaa ka mid ah sida aad ugu dulqaadatid qofka aad jeceshahay iyo heerka uu gaarsiisan yahay dareenkaaga ku aaddan muuqaal ahaantiisa.
Miyuu isbaddalay fikirkii aad ka qabtay hammiga aad ka lahayd? Ma yaraaday dulqaadka aad u muujin jirtay? Quruxdii kaaga muuqan jirtay makaaga muuqataa wali?
Waxaa kale oo aad isweydiin kartaa in muddooyinkii dambe aad jeceshahay la joogista iyo la hadalka qofka. Waxaa laga yaabaa inaad dooneysid nasiino dhinaca xiriirka ah oo aad uga fogaaneysid qofka aad wada socoteen.
Hase yeeshee arrimahan oo dhan way dhici karaan marka uu xiriir jiro laakiin micnaheedu ma aha in xiriirkaas uu sidaas ku dhammaaday. Qiimeyn ku samee, kaddib waxaa kuu soo baxeysa in qofka aad isla socotiin aad wali jeceshahay iyo in kale.
3- Suureyso sida aad noqon kartid qofkaas la’aantiis
Tallaabadan waxaad u baahan tahay ka hor inta aadan qaadanin go’aan kama dambeys ah. Marka aad suureysatid mustaqbalkaaga, qofkan qeyb ma ka yahay, xagee ayuuse uga jiraa?
Mararka qaarkood dada aan jecel nahay waan islaheysiinnaa, wayna adag tahay in ay nolosheenna ka baxaan. Si daacad ah uga fakar arrintaas oo hubso sida ay xaaladdaada noqon karto qofkaas la’aantiis. Miyey habboon tahay in aad horay uga socotid mise waa in aad isla jaan qaaddaan?
Waxyaabahan oo dhan waxay kuu fududeynayaan in aad si buuxda u ogaatid waxa uu qalbigaaga ka yahay qofka aad xiriirka la leedahay.
Guurka ay waalidka qorsheeyaan malaga ilbaxay? Qiso ku dhacday gabar
20 xaqiiqooyin cajiib ah oo ku saabsan qalbiga (wadnaha)